3D Sandwich Panel
Marka dharka lagu miiro miiraha darmuusiga, marada ayaa dhuuqda cusbada waxayna u kacdaa dhererka hore. Sababtoo ah qaabdhismeedka lagama maarmaanka ah, iskudhafyada ka samaysan 3D sanduuqa dharka leh ayaa ku faanaa caabbinta ka soo horjeedka u nuglaanta malab dhaqameedka iyo qalabka xumbo xumbo leh. Faa'iido ...
Waxaa qoray admin on 21-03-09
3-D dhismaha spacer-ka waa fikrad cusub oo la soo saaray. Dusha sare ee dharka ayaa si xoog leh isugu xiran midba midka kale iyadoo lagu dhejinayo fiilooyinka xargaha oo isku dhafan maqaarka. Sidaa darteed, dharka 3-D spacer wuxuu ku siin karaa caabbinta maqaarka laf-dhabarka wanaagsan, adkeysiga wanaagsan iyo superio ...
Fiberglass la jeexay xargaha
Fiberglass-ka la jeexay xargaha oo ay ku jiraan xargaha la jarjaray ee loogu talagalay BMC, Xargaha la jarjaray ee loogu talagalay Thermoplastics, Xargaha qoyan ee la gooyey, Alkali-adkeysi u leh xargaha (ZrO2 14.5% / 16.7%). 1) .Kooxda Xiran ee loogu talagalay BMC oo la jeexjeexay BMC waxay la jaan qaadayaan polyester unsaturated, epoxy resin iyo resi phenolic ...
Cadka Cadka Saqafka Sare
Waxaa qoray admin on 21-03-02
Saqafka dusha sare ee dusha sare waxaa badanaa loo isticmaalaa inay yihiin substrates aad u fiican oo loogu talagalay qalabka saqafka ee biyuhu galaan. Waxaa lagu gartaa inuu yahay xoog siligga sarreeya, iska caabbinta daxalka, qoynta fudud ee bitumen, iyo wixii la mid ah. Awoodda muddada dheer iyo iska caabbinta ilmada waa la sii horumarin karaa iyadoo lagu darayo xoojinta ...
CSM E-Glass Chopped Strand Mat waa dhar aan la tollayn oo ka kooban istaandarro la jarjaray oo si aan kala sooc lahayn loo qaybiyey oo lagu hayo budo / emulsion binder. Waxay ku habboon tahay UP, VE, EP, cusbada PF. Wareegga duubku wuxuu u dhexeeyaa 50mm ilaa 3300mm, miisaanka culeyska ayaa u dhexeeya 100gsm ilaa 900gsm. Balladhka caadiga 1010 / ...
FRP albaabka / Fibreglass Door / albaabka SMC
Albaabada Shiinaha Beihai Fiberglass (Albaabada FRP) waa kuwo si aad ah isugu dheelitiran oo moodallo badan la heli karo. Tani waxay ka dhigeysaa iyaga in loo isticmaali karo albaab ahaan ama albaabka musqusha ee hoyga, hudheelka, isbitaalka, dhismaha ganacsiga iyo wixii la mid ah. Maalmahan albaabka Fiberglass wuxuu aad ugu soo badanayaa suuqa adduunka noocyo func ...
Weelka dheriga FRP
1.Glasska ubaxa lagu xoojiyay ee balaastiggu wuu ka xasilloon yahay weelka ubaxa caadiga ah, waana ka adkeysi badan yahay ubaxa caadiga ah. Waxay hayn kartaa oo daadin kartaa biyaha, saliidda iyo dareerayaasha kale muddo dheer, iyadoo leh caabbado baxsiga oo wanaagsan. Weelasha ubaxa FRP waa qaab jilicsan, gre ...